Global Voices teny Malagasy · Liva Andriamanantena – Febroary 2019
Liva Andriamanantena · Febroary, 2019
Avrily 2016 25 Lahatsoratra
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Marsa 2016 · 1749 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Febroary, 2019
22 Febroary 2019
Milaza ireo manam-pahaizana ao amin'ny Firenena Mikambana fa olona an-tapitrisany maro no mety ho nampidirina ao amin'ny toby Shinoa "fiarenana indray" . Kanefa firy no maty tao anatin'izany toerana izany?
Bilaogera Birmana voaheloka higadra roapolo taona sy enimbolana an-tranomaizina
Mpanoratra Imran Jamal · Myanmar (Birmania)
Nanameloka an'i Nay Phone Latt higadra roapolo taona sy enim-bolana an-tranomaizina ilay mpitsara Daw Soe noho ny fananana lahatsary voarara sy ny fananana bilaogy hanehoana ny ahiahiny mikasika ny zava-tsarotra tsy mitsaha-mitombo atrehin'ny vahoaka Birmana amin'ny fanehoana ny heviny hatramin'ny fihetsiketsehana ny taona (2007) .
21 Febroary 2019
Vaovao farany Lingua volana Janoary 2019
Mpanoratra Mohamed ElGohary · Mediam-bahoaka
Manolotra ny Lingua volana Janoary 2019 ny mpitantana ny Lingua
Mpanoratra Fred Petrossian · Iràna
Raha mbola nanohy ny hetsiny ireo mpanao fihetsiketsehana nanerana an'i Iran nanohitra ny valim-pifidianana filoham-pirenena ny volana 12 Jona 2009 dia nosamborin'ny manampahefana Iraniana ireo mpikatroka an-jatony, anisan'izany ireo bilaogera.
19 Febroary 2019
Mpanoratra Noha Atef · Ejipta
17 Febroary 2019
Mpanoratra Abdoulaye Bah · Afrika Mainty
Torkia: Ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana amin'ny aterineto
Mpanoratra Bhumika Ghimire · Tiorkia
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Torkia, ilay demaokrasia maoderina izay mirehareha amin'ny maha-fanjakana laika azy na dia eo aza ny tsindry goavana avy amin'ny Islamista fondamentalista dia indrisy anefa fa tena mavitrika amin'ny famerana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera ity firenena ity. Nosakanana tao amin'ny firenena...